भविष्य बनाउने हो भने इतिहास बिर्सनु हुँदैन: सिइओ अनिल केशरी शाहको बिचार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > भविष्य बनाउने हो भने इतिहास बिर्सनु हुँदैन: सिइओ अनिल केशरी शाहको बिचार
भविष्य बनाउने हो भने इतिहास बिर्सनु हुँदैन: सिइओ अनिल केशरी शाहको बिचार
अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), नबिल बैंक
केही महिना अघि मलाई एक जना नेपालीले नेपाली खाना भनेको यस्तो पनि हुन्छ है भनेर देखाउनुभयो । अहिलेसम्म हामीले धेरै फ्रेन्च, कन्टिनेन्टल, जापनिज रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खायौ । खाना खाँदा कस्तो चिटिक्क जस्तो लाग्ने । नेपालीको खाना सामान्यतया एकै खालको हुने गर्छ ।
मलाई बेला बेलामा लाग्ने गर्दथ्यो की, नेपाली खाना पनि त्यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला । मग मग बास्ना आउने, हेर्दा पनि सुन्दर कला जस्तो हुने खालको नेपाली खाना कहिले होला ? भन्ने लाग्दथ्यो ।
मैले एक पटक टेलिभिजनमा देखे की एक जना नेपाली छोराले बनाएको खाना, अनि उहाँको कला । त्यो देखेर हामी सबैले उहाँले त्यो प्रतियोगिता जित्नुहोस् भनेर धेरै कामना गर्‍यौ । पछि हामीले यो मान्छे को रहेछ, कुन ठाउँको रहेछ, उहाँले कुन ठाउँमा गएर अध्ययन गर्नु भएको रहेछ भनेर हामीले अध्ययन गर्‍यौ । जब उहाँले आफ्नो लगनशीलताकै कारण सानो उमेरमा, धेरै ठुलो रिस्क लिएर अघि बढेको थाहा भयो । धेरै मानिसले मलाई हेरेर भन्नुहुन्छ, ‘ओहो अनिल जी, तपाई जस्तो मेरो छोरा छोरी हुनुपर्‍यो ।’
म भन्छु, ‘मैले के गरे ? स्कुल गए, बिबिए गरेँ, एमबिए गरेँ । एउटा उद्देश्य लिएर आएँ । एउटा बैङ्कमा जागिर खाएँ । र, जागिर खाँदा खाँदै यहाँसम्म पुगे । म अरूले बनाइसकेको बाटोमा हिँडे । हो अलि चाँडो हिँडे होला, कुनै बेला अलि ढिलो हिँडे होला तर बाटो त मैले बनाइन नि । तर आजको सेफ सन्तोष शाह यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ की उहाँले आफूले बनाएको गोरेटो बाटोमा हिँडेर विश्वभर नेपालको राम्रो पक्ष के छ भनेर चिनाउनु भएको छ ।
मान्छेको पढेर भविष्यमा डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने चाहना हुन्छ, सन्तोष त्यो बाटोमा हिँड्नु भएन । उहाँ आफ्नो मनको बाटोमा हिँड्नु भयो । उहाँ आफ्नो सपना साकार कसरी गर्ने भनेर सपनाको बाटोमा हिँड्नु भयो । उहाँ आफ्नो कामप्रति लजाउँदिन भन्नुहुन्छ । म जहाँबाट आए त्यो माटोको धेरै माया छ । त्यही माटो, पानीले गरेर आज म यहाँ पुगेको छु ।
मैले धेरै नेपाली भेटेको छु, उहाँहरूले इतिहासको कुरा गर्नुहुन्न, आजको कुरा गर्नुहुन्छ र भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ उहाँहरू इतिहासबाट लजाउनु हुन्छ की भन्ने लाग्छ । सन्तोषलाई देख्दा लाग्यो की उहाँमा म यो ठाउँबाट आए वा त्यो गाउँबाट आए भन्नमा धेरै गौरव छ । त्यो मेरो इतिहास हो भनेर भन्नुहुन्छ ।
नेपाली भनेको त त्यो पनि हो की । किनभने हाम्रो देश विश्वमा चिनिने भनेको कै इतिहासले गर्दा हो । हाम्रो बाउ, बाजे, बराजुहरूले जुन मन्दिर, स्तुपा, दरबार, ढुंगेधारा बनाउनु भयो । नेपालमा संसारभरका मानिस त्यही हेर्न आउने गरेका छन् । हामी हाम्रो इतिहासबाट व्यक्तिगत रूपमा किन लजाउने त ? म उहाँबाट धेरै नै प्रभावित भएको छु ।
मैले जहिले पनि भन्छु,‘कुनै पनि देशको भविष्य भनेको त्यो देशको युवाहरू हो ।’ कुनै पनि देशको भविष्य त्यो दिन कालो हुन्छ, जुन दिन त्यो देशमा युवाहरूले आफ्नो भविष्य देख्दैनन् । जब युवाहरू देशमा होइन विदेशमा पसिना बगाउँछु, बुद्धि प्रयोग गर्छु भन्छन् नि अनि त्यो देशको भविष्य कालो हुन्छ । हाम्रो देशमा धेरै अन्धकार छ । त्यो अन्धकारमा उज्यालो ल्याउने केही व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ ।
हामीले आज जसलाई नबिल हिरो भनेर सम्मान गरिरहेका छौँ, उहाँ पनि त्यस्तै झलझली बलिरहेको बत्ती हो । उहाँ जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ उज्यालो फैलाउनु हुन्छ । युवाहरूमा आशाको दीप जलाउनु हुन्छ । उहाँले युवाहरूलाई अरूले जे गरेको छ त्यो मात्रै गर्नुपर्दैन, हामी फरक केही गर्न सक्छौँ र त्यो गर्‍यौ भने सक्षम मात्रै होइन खुसी पनि हुन्छु भनेर भित्रै बाट सोच जगाउनु भएको छ । उहाँ युरोप अमेरिकामा पनि बस्न सक्नुहुन्थ्यो होला तर उहाँ नेपालमा नै किन फर्कनु भयो होला । मेरो नेपालमा खानाको इतिहास जोडिएको छ ।
बैङ्किङमा भनेको २७ वटा वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी छन् । हजारौँ मानिस बैङ्कमा काम गरिरहनु भएको छ । तर पर्यटन क्षेत्र भनेको नेपालमा अर्थतन्त्रमा मेरुदण्ड नै हो । पर्यटनले गर्दा हरेक नेपालीको घरको चुल्हो बल्छ । नेपालमा पर्यटन मन्दिर, गुम्बा, डाँडाकाँडा हेर्न, गैँडा हेर्न आउने गर्दछन् । विश्वका कतिपय मानिस अर्को देशमा खाना खान जाने गरेका छन् । नेपालमा आउने पर्यटकले पनि अब नेपाली खाना खान पाउनु पर्छ । पहिला भएका खानाका परिकार पनि रहनुपर्छ । अबका युवामा नयाँ सोच आइरहेको छ । उहाँले नयाँ पुस्ताको दिमागमा बत्ती बालिरहनु भएको छ ।
(सिइओ, शाहले सेफ सन्तोष शाहलाई बैङ्कले सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)
२०७७ चैत्र १३ गते १३:४४ मा प्रकाशित
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ बाँडफाँट, कसरी हेर्ने नतिजा ?
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ तीन शाखा सञ्चालनमा
लिटल एन्जल्स स्कुलको स्विमिङ पुलमा डुबेर बालकको रहस्यमय मृत्यु !
‘भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’को लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान
कमलपोखरीको स्वरुप फेर्दै महानगर, चैत मसान्तासम्म पुननिर्माण सम्पन्न हुन्छः मेयर शाक्य
आमा समुहद्वारा ४०० लिटर मदिरा नष्ट